မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: March 2012
မြန်မာပြည်ရေပေးဝေရေး စနစ်က အစကတည်းကမှားလို့နေပါသည်။ ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်မှုကလည်း နဂို ကတည်းက မှားယွင်းလို့နေ၏။ ရေကို အိမ်တိုင်ရာရောက်တတ်ပေး၍ ရေမီတာတတ်၊ ရေဖိုးကောက်၊ ရသည့်ရေဖိုးဖြင့် နောက်ထပ် အိမ်ယာများအတွက် ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း။ ဆင်ခြေ ဖုန်းဒေသများတွင် အုတ်ကန်တူး၍ ရေအလကားပေးလိုက်သောအခါ ဘာမှရှေ.ဆက်မလုပ်နိုင်ဖြစ်ရသည်။
ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်၍ ရေပေးဝေရမည့် အစား အ၀ီစီတွင်းတူး၍ ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်သည့် အတွက် စရိတ်စက အလွန်ကြီးမားခဲ့ရပြီး လောက်ငှမှုလည်း မရှိတော့ချေ။
လွန်ခဲ့သော လအနည်းအငယ်က ရေသန်.အင်ဂျင်နီယာအချို့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ရေပေးဝေရေးစနစ်အကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရေးပေး စနစ်ကို ပုဂလိက ကုမ္ပဏီများမှ မြစ်ရေ ကို ရေလှောင် ကန်ဖြင့် ဆယ်ယူ၍ ရေစစ်ပြီး ဖြန့်ဝေမည်ဟု သိရ၏။ ရေသန့်လုပ်ငန်း ကို ပုဂလိက သို့လွှဲပေးသင့်ပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် ဆယ်မြောင်းများ အင်မတန်တည် ဆောက်နေသော်လည်း ရေသန့် ထုတ်၍ ရေပေးဝေရကောင်းမှန်း စစ်အစိုးရတစ်ယောက် နားမလည်ခဲ့ သည်ဖြစ်၍ ပြည်သူအများ ဆယ်ကြီးဘေးထား၍ ရေငတ်ခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ ရေရရှိရေး အတွက် ရေလှောင်ကန်များမှ ရေသန့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေနှင့်မီး မရှိသရွေ့တော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်လည်း မရှိနိုင်တော့၊ ပြည်သူကို ရေမရှိမီးမရှိပဲ အုပ်ချုပ်နိုင်သူဆိုလို့ အာဏာရှင်ပဲ ဖြစ်ရပေမည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် မီးပျက်လျှင် အစိုးရပြုတ်ကျသွားနိုင်၏။
ကျောက်မီးသွေးသုံးဓါတ်အားပေးစက်ရုံလိုဟာမျိုး ကို ကန့်ကွက်တတ် သော နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမား များရှိနေသရွေ့လည်း ပြည်သူများ ဘ၀ မီးမရှိပဲ မှောင်မဲနေဦးမည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောက်မီးသွေး ဖြင့် ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုမှာ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှု အပေါင်း၏ ၅၀% ရှိသည်ကို မြန်မာပြည်မှ နိုင်ငံရေးသမားများ မသိကြပေ။ ပြည်ပ နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဖိအားပေးမှုများ (သို.) SANCTIONS ကြောင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရပြောင်းလဲလာသည်ဟု ပြောသည့် နိုင်ငံရေးသမားများ များကလည်းရှိသေး၏။ လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် လူအားလုံးထောင် ထဲပြန်ထဲ့၍ အာဏာရှင် ဆက် လုပ်လို့ရသေးသည်ကို သတိထားကြဖို့လိုသည်။ လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် ဘာကိုမျှကြောက်သော အစိုးရ မဟုတ်ပါချေ။
၎င်းတို့ ပါတီ၏ SANCTIONS မူဝါဒကို မှန်ကန်သည်ဟု သက်သေထူခြင်နေသဖြင့် SANCTIONS ကြောင့် အစိုးရ မင်းများပြောင်းလဲလာသည်ဟု အော်နေခြင်းသာဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့ MDC ပါတီမှ SANCTIONS ကို ဆက်လက်ထားရှိဖို့မသင့်တော့ပါဟု အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေပါသည်။ ပြည်သူ၏ ထမင်းလုပ်နှင့် ရှင်းနှီး၍ နိုင်ငံရေး တိုက်ပွဲကို ဆက်လက်မဆင်နွှဲတော့ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြော နေပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တော့ ပြည်သူ့အရေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ (၅) နှစ်နောက်ကျခဲ့ပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်သူတို့က နိုင်ငံရေးလောကတွင် နာမည်ကြီးများဖြစ်တော့ ပြည်သူက ယုံမိသည်။ ပြည်သူကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းပန်ချင်သည်မှာ နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားများပြောတိုင်း မယုံ ဖို့ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီ (သို့) နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူ အားအမှန်အတိုင်းတင်ပြဖို့လိုသည်။ နိုင်ငံရေးသမား ထက် တိုင်းပြည်ကို ပိုချစ်သော အခြားနိုင်ငံရေးသမားဟူ၍ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း မိမိ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀ လှလှပပ ဖြစ်ရေးအတွက် မိမိမူဝါဒ သာလျှင် မှန်သည်ဟု ပြည်သူအား အယုံသွင်းတတ်သော နိုင်ငံရေးသမား ဟူ၍ တော့ရှိနိုင်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်သော NLD ၏ ဆင်ခြေမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ဒါဆို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ရှိနေသရွေ့ ခင်ဗျားတို့ သပတ်မှောက်နေရမည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပျက်ပြားသွားအောင် လုပ်ဖို့ မလွယ်သေးချိန်မှာ ဒါကြီးကို အနာလုပ် NO VOTE လုပ်နေလျှင် တိုင်းပြည် နာမည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၀ ကို ၀င်ပြိုင်ကြဖို့ ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည်။
ယခုတော့ ၄၈ နေရာ အနိုင်ရရှိရေးအတွက် သူတို့ပဲပြောနေကြပြန်ပြီ။ NLD ပါတီက ဒေါသကြီးသည်။ နာမည်ကြီးနေသရွေ့တော့ ဒေါသဖြင့်လုပ်နေလည်း စေတနာဟု ထင်နေကြဦးမည်။ NLD ဒေါသဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် (၅) နှစ်နောက်ကျခဲ့ပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ အမှန်တရားကို အမှန်အတိုင်းတင်ပြသွားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောသမျှပြည်သူအတွက်ဖြစ် သည်။ အခြားပါတီတစ်ခုအား မတရားတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် လူကိုဗဟိုပြုသော နိုင်ငံရေးမှ မူဝါဒကို ဗဟိုပြုသော နိုင်ငံရေးကို ကွဲပြားစွာလေ့လာနိုင်ဖို့လိုပြီဖြစ်၏။
တိုင်းပြည်အတွက် ချမှတ်သော မူဝါဒများကို ကြည့်၍ ကောင်းဆိုးဝေဖန်နိုင်ဖို့လိုလေပြီ။ မိမိမဲထဲ့မည့် ကိုယ် စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးခြင်းစီ၏ အရည်အခြင်းကို ကြည့်၍ မဲပေးနိုင်ဖို့လိုလေပြီ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသော အမတ် ၅၀% ကျော်မှာ အရည်အခြင်းမရှိသူများဖြစ်၍ ထိုရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ် ကို ဦးဆောင်နိုင်မည့်သူ မရှိဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပြည်သူများစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်သည်။ ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်း ဆိုသည်မှာ ကြီသီးထဖွယ်နားထောင်၍ ကောင်းသော်လည်း လက်တွေ့နှင့် ဘာမှ မဆိုင်ဖြစ်တတ်သည်။
ယခုလည်း NLD တွင် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိသော သူများ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ၀င်ရောက်အရွေးခံကြဦးမည်။ ၂၀၁၀ တုန်းကလည်း သပိတ်မှောက်ဆိုတော့ သူတို့ပဲဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လက်ညိုးထောင်ခေါင်းငြိမ့် ဆိုသည်မှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီတွင်သာမဟုတ် NLD ပါတီတွင် လည်း ထိုနည်း၎င်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာမိတ်ပါတီ MYANMAR NATIONAL CONGRESS မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၃) နေရာ ၀င်ပြိုင်မည်။ ပြည်သူအတွက် မှန်ရာကိုပြောမည့်သူများ။ အထူးသဖြင့် အစိုးရကိုသာမက NLD ၏ အမှားများ ကိုပါထောက်ပြမည့် သူများ အရွေးခံမည်။
ပြည်သူက သတ္တိရှိဖို့လိုသည်။ သတိရှိဖို့လိုသည်။ လက်ညိုးထောင်ခေါင့်ငြိမ့်များကို ရွေးမိလျှင် ပြည်သူ့ကိုယ်စား အမှန်ပြောမည့်သူများ လွတ်တော်ထဲမရောက်ဖြစ်မည်။
လှိုင်မြစ်ရေကို သန့်စင်ကာ ရန်ကုန်မြို့ကိုတစ်နေ့လျှင် ရေဂါလန် သန်း ၉၀ ခန့် ပေးဝေမည့် စီမံကိန်းအသစ်အတွက် အကြိုလေ့လာမှုလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်
Sunday, 04 March 2012 01:20
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ် လျာထားသည့် လှိုင်မြစ်ရေတင်(ကွေ့တန်းရှည်) စီမံကိန်းအတွက် အကြိုလေ့လာမှုလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
လှိုင်မြစ်ရေတင်(ကွေ့တန်း ရှည်)စီမံကိန်းမှာ မှော်ဘီမြို့နယ် ကွေ့တန်းရှည်ရွာအနီး လှိုင်မြစ်၏ အငန်ဓာတ်လျော့နည်းသည့်အပိုင်းမှ သန့်စင် ကာပေးဝေမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့လျှင် ရေဂါလန် သန်း ၉၀ ခန့် ရရှိမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လက်ရှိလူဦးရေနှင့် တိုးပွားလာမည့် လူဦးရေအတွက် ရေပေးဝေနိုင်မည့် ရေအရင်းအမြစ်သစ်များ လိုအပ်လာမည်ဖြစ်ရာ ယင်းအတွက် အဆိုပါစီမံ ကိန်းကို ပြုလုပ်ရန် လျာထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းစီမံကိန်းကို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
''ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လက်ရှိလူဦးရေက ခြောက်သန်းနီးပါးလောက် ရှိပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၄၀ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ လူဦးရေ ၁၀ သန်းဖြစ်လာမယ်လို့ မှန်းထားတဲ့အတွက် ရေ လုံလောက်စွာ ပေးနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်နေတယ်။ ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းအသစ်တွေ ရှာဖွေနေတယ်။ လောလောဆယ် တွေ့ရှိထားတဲ့ မှော်ဘီက လှိုင်မြစ်ရေတင်(ကွေ့တန်းရှည်) စီမံကိန်းတွေအတွက် အကြိုလေ့လာမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းက တစ်နေ့ကို ဂါလန် ၉၀ လောက်ရမယ်။ စီမံကိန်းကလုပ်ရမယ့် ပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက် မြို့တော် စည်ပင်ဘတ်ဂျက်နဲ့ဆိုရင် နည်းနည်းကြာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရေမြန်မြန်ပေးဝေနိုင်အောင် ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ ရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ဒါပထမဆုံး ပူးပေါင်းပြုလုပ်မယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် MoU လက်မှတ်ထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်''ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ ငမိုးရိပ်ချောင်းနှင့် အမှတ် ၇ လမ်းဆုံရာ စစ်ပင်တောင်ကျေးရွာအနီးတွင် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:49 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:29 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:46 PM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှားရှားပါးပါး ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပြည်တွင်း ထင်းသုံးစွဲမှု ပမာဏကို လေ့လာနိုင်ဖို့တင်ပြလိုက်ပါတယ် မူရင်း စာသားများဟာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်လို့ မူရင်းအတိုင်းတင်ပြပါတယ်။ စာဖတ် ပရိသတ်များမှ ဘာသာပြန်ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါက နောက်ပိုင်းတွင် အချိန်ယူ၍ တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
One of the main causes for deforestation in Dry Zone is higher dependency and demand on the woody biomass asamain source of household energy in rural area while there isalack of alternative affordable energy supply. By promoting the use of energy efficient cooking stove, it would not only save the woody biomass at household level but also accelerate the momentum of community participation with greater awareness and conscientiousness on environmental conservation initiatives in project villages. Before the project commenced,abaseline survey was conducted in three townships of Magwe Region, namely, Aung Lan, Thayet and Sinbaung We in 2010 and it covered 924 households. Local residents used five different types of stove, viz. open stove, A1 stove, Pathein charcoal stove, hand made and electric stove. The survey results pointed out that the average firewood consumption (ton) per year per household was not less than 1.5 tons and the cost of utilizing open stove (the least energy efficient stove) per month per household was 4,332 kyats.
% of household corresponding to type of stove used Vs Township
Average of firewood consumption (ton) per year per hh Vs Township
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:52 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:22 AM0comments Links to this post